I-Arhente yokuKhuselwa kokusiNgqongileyo (i-EPA) ivume iLysol Disinfectant Spray yokulwa i-SARS-CoV-2, intsholongwane ebangela isifo se-coronavirus 2019 (COVID-19).
I-Arhente yokuKhuselwa kokusiNgqongileyo (i-EPA) ivume iLysol Disinfectant Spray yokulwa i-SARS-CoV-2, intsholongwane ebangela isifo se-coronavirus 2019 (COVID-19), ngokusekwe kwiziphumo zophando olupapashwe kwiJenali yaseMelika yoLawulo lwezifo (AJIC) ), Iarhente yabhengeza kumaphephandaba.
Njengamatyala e-COVID-19 anyuke ebutsheni balo nyaka, uninzi lwezicoci zentsholongwane kunye nezibulala-ntsholongwane zenza amabango omsebenzi ngokuchasene nentsholongwane, kodwa kuphela ziimveliso ezivunyiweyo ze-EPA ezinokuthengisa ngokusemthethweni ngaloo ndlela. Ngokuvunywa kwale veki, iLysol Disinfectant Spray (i-EPA Reg No. 777-99) kunye neLysol Disinfectant Max Cover Mist (EPA Reg No. 777-127) kwafunyaniswa ukuba ayenzi intsholongwane kwisithuba semizuzu emi-2 yokusetyenziswa kwiindawo ezilukhuni, ezinganyibilikiyo , kwisikhokelo sovavanyo lwe-EPA.
Uphononongo olwenziwe ngontanga lwe-AJIC luvavanye ukusebenza kweemveliso ezininzi ngokuchasene ne-SARS-CoV-2 kwaye yaxela ukusebenza kwe-99.9% yeLysol ngokukodwa.
I-Surin disinfection yeyona nto kugxilwe kuyo ngabaphandi ngexesha lobhubhane, njengoko bekungakhange kucace ukuba i-SARS-CoV-2 inokuhlala ixesha elingakanani kwiindawo ezahlukeneyo. Okwangoku, iZiko laseMelika lokuLawula nokuThintela izifo (CDC) licacisa ukuba “kunokwenzeka ukuba umntu afumane i-COVID-19 ngokuchukumisa umphezulu okanye into enentsholongwane kuyo emva koko achukumise umlomo, impumlo, okanye mhlawumbi ngamehlo abo. Le nto ayicingelwa njengeyona ndlela iphambili yokusasazeka kwentsholongwane, kodwa sisafunda banzi ngendlela esasazeka ngayo le ntsholongwane. ”
I-CDC icebisa ukubulala iintsholongwane ngokucokisekileyo kusetyenziswa ii-EPA ezibhalisiweyo kwizintlu kuluhlu N.
“Ukudluliselwa kwamagciwane okuphefumla kwentsholongwane njenge-COVID-19 kunokuncitshiswa ngokusetyenziswa ngokupheleleyo nangokugqibeleleyo kwesibulali-ntsholongwane esibhalisiweyo se-EPA ngokwemiyalelo yomenzi, efakwe kuLuhlu N lwe-EPA, kwiindawo ezingaphezulu kunye nococeko olulungileyo lomntu siqu, kubandakanya isandla ucoceko, nciphisa ubuso bakho, kunye nempilo yokuphefumla / ukukhwehlela, ”UWilliam A. Rutala, PhD, MPH, CIC, kunye noDavid J. Weber, MD, MPH, babhale kwinqaku le-Infection Control Today®.